पर्वको मिठाइ कराची हल्वा यसरी बनाउनुहोस्
काठमाडाैं | कात्तिक १८, २०७८
पर्वको मिठाइको महत्त्व निकै रहन्छ । अझ तिहारमा त मिठाइ सबैको प्रिय हो । छठमा पनि मिठाइको आफ्नै विशेषता छ ।
नयाँ–नयाँ मिठाइ बनाएर तिहारको भाइटीकाको भागमा राख्ने सबै दिदीबहिनीको रहर रहन्छ । रङ्गीचङ्गी कलरफुल रोटी र मिठाइ तिहारको विशेषता हो ।
फूलमाला जस्तै मिठाइमा पनि विविधता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता परापूर्वकालदेखि नै छ ।
यहाँ हामीले एउटा नौलो मिठाइ इराची हल्वाको पूर्ण रेसिपी लिएर आएका छौं । जुन घरमै सहज रूपमा तयार गर्न सकिन्छ र निकै स्वादिष्ट पनि हुन्छ ।
मकैको पिठो, चिनी, घ्यू र ड्राइनट्स यसका प्रमुख सामग्री हुन् । अन्य हल्वाभन्दा यो हल्वा भिन्न र देख्नमा पनि आकर्षक हुन्छ ।
कराची हल्वा बनाउन चाहिने सामग्रीः चिनी २ कप, पानी एक कप, कर्नफ्लोर १ कप, लेमन जुस २ टेबल स्पुन, ओरेन्ज कलर पिन्च, घ्यू १/२ कप, पिस्ता २ टेबल स्पुन, रोज वाटर ३ ड्रप, सुकमेलको धुलो १/२ स्पुन, काजु १५ ग्राम, आल्मोन्ड १५ ग्राम, केसर पिन्च
कराची हल्वा बनाउने तरिकाः चिनी र पानी उमाल्ने र ग्लेज तयार हुनासाथ पानीमा कर्नफ्लोर घोलेर हाल्दै चलाउने । बाक्लो हुनासाथ घ्यू, रोज वटर, लेमन जुस, सुक्मेलको धुलो र ओरेन्ज कलर हालेर चलाउने । बनाएको हलुवालाई ट्रेमा फिजाएर ड्राइनट्सहरू छर्कने र राम्ररी सम्याउने । अन्त्यमा केसर छर्केर चिसो बनाउने र फ्रिजमा राखिदिने । चिसो भएर जम्नासाथ आफूले चाहेको सेभमा काटेर सर्भ गर्ने ।
लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ : पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेल
कात्तिक १८, २०७८
जाडोमा लोकप्रिय तराईको लोक परिकार ‘बगेडी’
बगेडी अहिले राजधानीमा निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ । तराईबाट आयातित यो चराको परिकार धेरैको रिजाइमा पर्छ । विशेष गरेर जाडो भगाउने परिकारको रूपमा परिचित बगेडीले शरीरको तापक्रम बढाउने र चिसो भगाउने गर्दछ...
ईटालियन डिस क्यनोलोनी फ्लोरिनटिन कसरी बनाउने ?
ईटालियन डिस क्यनोलोनी फ्लोरिनटिन धेरैलाई मनपर्ने परिकार हो । पिज्जा पास्ताभन्दा पृथक स्वादको क्यनोलोनी फ्लोरिनटिन परिकार भेज या ननभेज दुवैमा बनाउन मिल्छ । चिज र क्रिमको मिश्रणले यो खानालाई एम्मी बनाएको हुन्छ । ...
तिहार विशेष : काँडे खुर्मा रोटी, कसरी बनाउने ?
कात्तिक २०, २०७८
काडे खुर्मा रोटी पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ । बच्चालाई टिफिन होस् या फुर्सदमा चिया कफीको साथी यो रोटी धेरैको रोजाइमा परेको छ । स्कूल कलेजको क्यान्टिनमा पनि खुर्मा रोटी धेरैले रुचाउँछन् । फुर्सदमा बनाएर व्यस्त...
कोरोना महामारीका कारण ठप्प ब्याङ्केट बिजनेश अहिले आएर चम्किएको छ । सबैजसो पार्टी प्यालेस, इभेन्ट हल, भेन्यूहरू अहिले भरिभराउ छन् । २ वर्षदेखि रोकिएका विवाह भइरहेका छन् । लकडाउनका कारण स्टाफहरू निकालिए...
पार्टीमा खानाका परिकार बनाउँदा कसरी समन्वय गर्ने ?
पार्टीमा कति जनालाई कति खाना पकाउने भन्ने कुरामा धेरैको जिज्ञासा हुन्छ र यो पकवान पेशामा जान्नैपर्ने एक प्राविधिक ज्ञान पनि हो । पछिल्लो समय पकवान पेशामा पनि धेरै विज्ञहरूको बाहुल्यता आउन थालेयता अन्दाजभन्दा पन...
जनकपुरको मौलिक मिथिला परिकार बगिया कसरी बनाउने ?
जनकपुरको मौलिक परिकार बगिया कसरी बनाइन्छ भन्ने चासो धेरैमा हुने रहेछ । धनुषा जिल्लाको एक धार्मिक शहर जनकपुरमा निकै लोकप्रिय यो परिकार पहाडी र हिमालीहरूले पनि खुब खोजीखोजी खान थालेका छन् । ...
रामायणमा को बन्लान् 'राम', महेश बाबु कि रणबीर ?
किसानको मुटु पकाएर खाने यी युवकलाई सुनाइयो यस्तो सजाय